Tsy misy fitsangatsanganana Paska ho an'ny Kristiana Palestiniana ao Gaza
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tsy misy fitsangatsanganana Paska ho an'ny Kristiana Palestiniana ao Gaza
Manodidina ny 1,100 ny Kristiana Palestiniana ao Gaza, maro amin'izy ireo no razamben'ny Kristiana voalohany tany Palestine (toerana niandohan'ny Kristianisma). Sambany, nolavin'ny manampahefana israeliana ny fahazoan-dàlana hitsangatsangana ho an'ny Kristiana Palestiniana rehetra avy any Gaza mba hankalaza ny Paska toy ny fanaony isan-taona, amin'ny alàlan'ny fanodinana manomboka any Betlehema ka hatrany Jerosalema hanarahana ny lalan'i Jesosy amin'ny Fitsanganan'ny maty.
Ny filana fameperana toy izany ihany ve no hamarinina?
Nilaza ny mpanara-maso ny zon'olombelona, ​​fa ny fanapahan-kevitr'i Isiraely handà tanteraka ny hetsika eo anelanelan'ny Gaza sy ny West Bank amin'ity Paska ity dia fanitsakitsahana bebe kokoa ny zon'olombelona palestiniana momba ny fahalalahana mihetsika, ny fahalalahana ara-pinoana ary ny fiainam-pianakaviana. Ny fitomboan'ny fameperana ny hetsiky ny Kristiana Palestiniana dia manondro ny fampiharana bebe kokoa ny 'politikan'ny fisarahana' Israel: politika iray mamepetra ny hetsika eo anelanelan'ny Gaza sy ny West Bank izay manalalaka ny fisarahana eo amin'ny faritra roa amin'ny faritany Palestiniana nozahana.
Ny isan'ny fahazoan-dàlana navoaka dia nihena isan-taona, ary nampiditra fandrarana lamba firakotra ho an'izay latsaky ny 55 taona - saingy ity no taona voalohany tsy namelan'ireo miaramila israeliana Kristiana Palestiniana avy any Gaza handeha any Jerosalema ho an'ny Paska.
Raha ny sasany kosa mampihatra ny finoana latinina ary manamarika ny paska amin'ny 21st tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity, maro hafa no ortodoksa atsinanana ary mankalaza ny paska amin'ny 28th. Ny fombafomban-drazan'izy ireo dia mitaky fahatsiarovana ny Alahady Palm ao Betlehema, avy eo ny filaharana avy amin'ny Church of the Nativité any Betlehema mankany amin'ny Church of the Holy Sepulcher any Jerosalema, izay hinoan'ny Kristiana fa natsangana tamin'ny maty Jesosy taorian'ny nahafatesany.
Araka ny voalazan'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona israeliana Gisha, “Ny mpandrindra ny hetsiky ny governemanta any amin'ny faritany (COGAT) dia namoaka ny quota napetrak'i Israel ho an'ny fanomezan-dàlana fialantsasatra homena ny Palestiniana Kristiana monina eo ambany fifehezan'i Israel. Ny quota natolotry ny COGAT hahazoana fahazoan-dàlana fialantsasatra ho an'ny mponina ao Gaza amin'ity paska ity dia voafetra ho an'ny olona 200 mihoatra ny 55 taona fotsiny, ary ho an'ny dia any ivelany ihany; ny quota ho an'ny mponin'i West West dia voafetra ho 400 fahazoan-dàlana hivezivezy any ivelany, ary fitsidihana any Israel. Midika izany fa ny fianakaviana Palestiniana tafasaraka amin'i Gaza, Israel ary ny West Bank dia tsy afaka hanamarika ny fetin'ny Paska miaraka. Midika koa izany fa ny Kristiana rehetra ao Gaza dia tsy mahazo miditra amin'ny fianakaviana sy amin'ireo toerana masina any Jerosalema sy ny West Bank.
Ny fandraràna ny Kristiana ao Gaza dia tonga taorian'ny nanambaran'ny manampahefana israeliana ny fanidiana tanteraka ny Banky Andrefana sy Gaza ho an'ireo mponina Palestiniana nandritra ny herinandron'ny Paska, ny 19 aprily.th ho 27th. Manam-pahefana israeliana, izay mifehy ny lafim-piainana rehetra ho an'ireo Palestiniana nibodo azy izay nipetraka teo ambanin'ny fanjakany tao Jerosalema, ny West Bank ary Gaza, nanidy matetika ny faritra Palestiniana rehetra ary nanakana ny Palestiniana tsy hifindra eo anelanelan'ny tanàna Palestiniana mandritra ny fialantsasatra jiosy.
Tamin'ny 2016 farafaharatsiny, Palestiniana Kristiana 850 avy any amin'ny tanànan'ny tanàna Gaza no nandeha nankalaza ny Paska tany Betlehema ary nibodo an'i Jerosalema Atsinanana taorian'ny faneken'ny manampahefana israeliana hanome alalana azy ireo.
eTN Hero: Cordelia Igel, mpitarika ekipa ao amin'ny Vox Restaurant, Grand Hyatt Hotel Berlin
Mampitandrina ny manampahefana misahana ny fampandrosoana fizahan-tany any Sri Lanka, manampahefana amerikana ary anglisy manoloana ny fanafihana fampihorohoroana